Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo Dagaal Kula Wareegay Xero Ciidan. – Bogga Calamada.com
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin Oo Dagaal Kula Wareegay Xero Ciidan.
September 11, 2017 4:58 pm Views: 376
Wararka ka imaanaya gobalka Hiiraan ee Bartamaha dalka Somaliya waxey sheegayaan in ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar culus ku qaadeen xero ciidan oo ku taala deegaan dhaca duleedka magaalada Beledweyne.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weerar culus ku qaaday xero maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka Liyuu Boolis ee taabacsan dowlada Xabashida Itoobiya ay ka sameysteen deegaanka Maroodile oo ah deegaan u dhaw deegaanka Far-libaax oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada Beledweyne.
Dadka deegaanka waxey warbaahinta u xaqiijiyeen in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin dhowr jiha ka weerareen xerada waxaana dagaalka ka dhacay xerada la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalka markii muddo kooban socday ayeey bilaabeen maleeshiyaatka Liyuu Boolis iney cagaha wax ka dayaan,iyadoona ciidamada Mujaahidiinta si buuxda ay ula wareegeen gacan ku heynta xeradaasi.
Inta la xaqiijiyay gudaha xerada waxaa lagu arkay meydadka Labo askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Liyuu Booliska waxeyna ciidamada Shabaabul Mujaahidiin gacanta ku dhieen ganiimo kala duwan.
Saaka aroortii ayeey aheed markii weerar Iqtixaam ah oo lagu dilay inka badan Afartan askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Murtadiinta ay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ku qaadeen degmada Beledxaawo ee gobalka Gedo.